आशा खड्कालाई प्रेमीले धोकादिएपछि परिन् अप्ठ्यारोमा – Gazabkonews
आशा खड्कालाई प्रेमीले धोकादिएपछि परिन् अप्ठ्यारोमा, बिरामी परेर कन्छी र भुन्टीको समेत सुटीगं गर्न नसकेकी आशाको जिवनमा के हुँदैछ फेरी ? अब के गर्लिन् आशा ?
हल्का रमाइलोकी कालीबुढीको हजुरआमा बन्ने रहर बल्ल पुरा भयो । कालीबुढीले नातिनी जन्माएपछि माग्ने बुढा सुनका चुरा लिएर भेट्न पुगे, फिल्म छक्का पञ्जाको मासुको रमाइलो दृश्यको कुरा गरेर दुवै मज्जाले हाँसे, माग्नेसँग पुगेका युट्युबरले भिडियो भाइरल बनाए, हेर्नुहोस् माग्नेको अहिलेसम्मकै कमेडी भिडियो
सातामा नेप्से सूचक सामान्य बढ्दा कारोबार रकम २३ प्रतिशतले बढ्यो यस साता नेप्से परिसूचक सामान्य बढेर बन्द भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ३१७९ विन्दुमा रहेको नेप्से यस साता ०.०६ प्रतिशत अर्थात १.७८ अंक बढेर ३१८०.७८ विन्दुमा पुगेको छ। यस साता पनि नेप्सेले नयाँ अलटाइम हाइ रेकर्ड बनाएको छ।
बुधबार नेप्से परिसूचक ३१९९.०३ विन्दुमा पुगेर नयाँ अलटाइम हाइ रेकर्ड बनाएको हो। साताको अन्तिम कारोबार दिन भने १८ अंकको करेक्सन भएर नेप्से ३१८०.७८ विन्दुमा झरेको हो।यस साता सेन्सेटिभ इण्डेक्स भने घटेको छ। सातामा सेन्सेटिभ इन्डेक्स १.०१ अंक घटेर ५९१ विन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी,फ्लोट इण्डेक्स पनि ०.१७ अंक घटेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स स्थिर छ।
नेप्से सामान्य बढेपनि यस साता कारोबार रकम भने उच्च रुपले बढेको छ। गत साता ७९ अर्ब २४ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस साता ९७ अर्ब ५९ करोड बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।यस साता नेप्सेको कुल बजार पूँजीकरण ५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। गत साता ४४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेप्सेको यस्तो पूँजीकरण यस साता बढेर ४४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये यस साता ७ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी ६ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस साता उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ९.२८ प्रतिशत बढेको छ। गत साता ६८२२.३६ विन्दुमा रहेको यस उपसमूहको परिसूचक ६३.०२ अंक बढेर ७४५५.३८ विन्दुमा पुगेको छ।यस साता होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै ४.१८ प्रतिशत घटेको छ।